Hartford, CT • Fanorana amin'ny vatana sy fanorana NuRu
Mikaroha safidy tsara indrindra ho an'ny filanao fanorana Nuru mifaly sy fikosoham-batana any Hartford, CT.
Hartford dia renivohitry ny fanjakan'i Connecticut any Etazonia. Io no toeran'ny County County Hartford mandra-pahatongan'ny fanjakana Connecticut rava tamin'ny taona 1960. Io no tanàna lehibe ao amin'ny faritry ny tanànan'ny Greater Hartford. Mikaroha safidy tsara indrindra ho an'ny finaritra mahafinaritra Nuru fanorana filàna ary fikosoham-batana any Hartford, CT.
Fotoana tsara indrindra hitsidihana Aprily-Jona, Septambra-Novambra